Fitaovana Teknolojika Natao Hitahirizana Ireo Teny Tandindonin-doza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2017 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Filipino, Español, русский, English
Miatrika ny fanatontoloana haingana manerana izao tontolo izao isika, miavaka amin'ny fanjakazakan'ireo teny matanjaka fampiasa ara-toekarena amin'ireo fiteny hafa. Amin'ny farany, ireo fiteny tsy dia be mpiteny loatra dia harefo ka mety hanjavona mihitsy aza. Mitsahatra tsy mampianatra an'ireo zanany ny tenindreny intsony ireo ray amandreny ary ireto farany koa manjary voatery miresaka amin'ny fiteny hafa amin'ireo fiainana andavanandro, ary ny sekoly no manomboka izany.
Miisa ho 6 809 ireo fiteny voaisan'ny angondrakitra Ethnologue: Languages of the World [Haiolombelona : ireo fitenin'izao tontolo izao], izay ny 300 amin'ireo ihany no tenenin'olona 1 tapitrisa na mihoatra.
Efa manakaiky ny 450 ireo fiteny andalam-panjavonana ary azo isaina amin'ny rantsan-tànana sisa ireo zokiolona mahafantatra azy. Izay tena mampanahy: manakaiky ny antsasaky ny fiteny misy sisa no andalam-panjavonana amin'io taonjato hoavy io.
Ny Living Tongues Institute for endangered languages (Ivontoeran'ireo fiteny velona ho an'ireo fiteny tandindonin-doza) dia fikambanana iray ao Orégon, ao Etazonia, miasa mba hitadiavana vahaolana mikasika io toejavatra io. Fantany fa ny fanjavonan'ny fiteny iray dia midika ho famafàna tanteraka sy tsotra ny tantara iraisan'ny fiarahamonina iray manontolo. Raisin'ilay ivontoerana an-tànana ny firaketana tahirinkevitra siantifika mikasika ireo fiteny tandidonin-doza, sady mitondra fanohanana ho an'ireo vondrom-piarahamonina amin'ireo ezaka ataony mba hitehirizana sy hanomezana aina indray ny fahafantarana ireo fitenindreniny, avy amin'ireo teknolojian'ny fampahalalambaovao sy ny serasera ary amin'ireo fitaovana fizarana.
Asa an-tsehatra tany amin'ireo koro-aka. Sary nalefa niaraka tamin'i I.
Ny anjara asan'ny “Living Tongues Institute for Endangered Languages” dia ny “fampiroboroboana ny famokarana tahirinkevitra, ny fikojakojana azy, ny fitehirizana sy ny famelombelomana indray ireo fiteny tandindonin-doza erantany, amin'ny alalan'ireo tetikasam-piarahamonina ho famokarana tahirinkevitra fampahalalam-baovao maromaro mifototra amin'ny fampiasàna ny fiteny. “Ity misy fampahafantarana fohy iray mampiseho ny fomba itondràny tsara ny asany:
Tamin'ny taona lasa, niasa niaraka tamin'ny “Living Tongues Institute for Endangered Languages” ny National Geographic tao anatin'ny tetikasany Enduring Voices. Nanomboka nanangona vola ny Living Tongues institute ho an'ny tetikasa iray hafa antsoina hoe “Endangered Language Technology Kits” [Ireo Fitaovana Teknolojika ho an'ny fiteny tandindonin-doza]. Ny fanomezana fitaovana fandraketana sy solosaina ho an'ireo 8 mpikatroka amin'ny sehatry ny fiteny teratany ao India, ao Papouasie Nouvelle-Guinée, ao Shili ary ao Però no kendren'io tetikasa io.
Ny karazana fitaovana teknolojika iray (LTK), natokana mba hahafahan'ireo mpikatroka mandray feo ny fiteniny, dia ahitana solosaina enti-tànana iray, fakàna feo enti-tànana iray, fakàntsary nomerika iray ary fakàna lahatsary enti-tànana iray. Hahazo fampiofanana ihany koa ireo mpikatroka sady eo ambany fiantsorohan'ireo manampahaizana manokana mikasika ny fampitam-baovao.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny “Living Tongues institute” dia efa nanolotra maro tamin'ireny fitaovana ireny ho an'ireo izay niasa ho amin'ny fitehirizana ireo fiteny tany anatin'ireo faritra mitoka-monina ary afaka nahitàna fahombiazana marobe. Amin'ny ankapobeny, mamokatra ireo vontoatiny azy manokana amin'ny fiteniny ireo mpiaro ny fiteny ireo, ary mizara izany amin'ny tambajotra. Mipoitra ao anatin'ity tahirin-tsary ity ireo nahazo tombony teo aloha, amperinasa.
Azonareo arahina amin'ireto kaonty Twitter sy Facebook ireto io tetikasa io
11 ora izayAngola